Action Bank | Tsirom slot £ 5 + £ 500 FREE! Action Bank | Tsirom slot £ 5 + £ 500 FREE!
Barcrest ny Action Bank slot dia tanteraka Fifaliana ho an 'ireo, izay te quality sary amin'ny endri-javatra tsy mampino tombony amin'ny 5×3 miraingiraingy azon'ny slot lalao amin'ny 20 betlines. Action Bank slot no nalaza noho ny taloha-Retro sekoly foto-kevitra sy ny marika miavaka. Afaka mahita ny banky andohalambony eny ampiasaina ao amin'ny resahana. Izany dia ny vata tokony mamaky trano ny handresy ny Mega jackpot. Tsy izany mahaliana?
Sary sy fanehoana an'ohatra:
Rehetra ny voninahitra ny fanaovana Action Bank dia malaza amin'ny lahatsary slot mpilalao mandeha amin'ny sary io lalao. Ianao virtoaly hiverina amin'ny fotoana sy hahita tranainy slot lany milina. Barcrest Niezaka mifangaro taloha foto-kevitra amin'ny fomba maoderina lahatsary slot endri-javatra mba hamorona ny tonga lafatra slot lalao ary nahomby. Ny tena marika amin'ny lalao ity dia lakroa, noughts, lehibe mena 7, Bar, Joker sy ny Golden Vault. Ny Joker milalao toy ny bibidia sy ny Golden Vault no aelezo mariky.
Toy hafa lalao slot ny aelezo marika dia te tokony basy ho an'ny, raha te-hahazo maimaim-poana spins. Fa momba izay ihany, nahazo maimaim-poana spins in Action Bank Casino Slots is quite different from other mobile slots. Voalohany tsy maintsy tanety dimy manahaka na aiza na aiza ao amin'ny nihodidina lalao kodia ary avy eo manontany anao hanokatra misy volamena andohalambony eny. Ianao mahazo maimaim-poana ny isan'ny spins efa nahazo ny fanokafana ny vata.
The lehibe mena 7 no avo indrindra famantarana sarobidy amin'ity lalao. Nitody telo na mihoatra 7s afaka manampy anao amin'ny nahazo ny loka lehibe indrindra amin'ity lalao. Afaka mamorona mahafa-po kokoa ny tsikombakomba amin'ny fipetrahana 7s sy ny tampon-tanety. Toy izany koa, ianao mandresy loka bebe kokoa rehefa tanety sarobidy fandoavana marika miaraka amin'ny tampon-tanety.
Misy mahagaga amin'ity lalao ho anareo. Mety hieritreritra fa marika noughts dia tsy misy ilàna azy, fa mety hivadika ho volamena, ary hanolotra anareo vaults perks kokoa noho ianao miandry isaky ny namoly.
Ny Big Bank Round:
Playing Big Bank Round in Action Bank azo atao raha mahazo 25 maimaim-poana spins. Dia nioty manodidina izay ilainao mba haka telo mitovy marika sy ny lalao valisoa anao 500x tanteraka nofatorany teo amin'ny tsatokazo vola.
Amin'ny RTP ny 95.16%, ity lalao ity iray ny miandrandra. Ny banky lehibe tombony no fanalahidy nisongadina ny lalao, ary dia lasa mahafinaritra avy amin'ny endri-javatra mahazatra. Ny kely indrindra amin'ny loka ho ambany dia ambany toy ny 20p mpilalao tsy manana be dia be ny very. A Tsy maintsy miezaka ho an'ny rehetra ny lohahevitra mahazatra tia!
Mobile Casino petra-bola amin'ny alalan'ny Phone Bill | Slots Pay by…